» बालचन्द्र बराल र शोभा कार्की दोहोरी च्याम्पियनको फाईनलमा
१ कार्तिक २०७८, सोमबार १६:३०
मकवानपुर, १ कात्तिक । चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को फाईनलमा पुग्ने अन्तिम जोडीको नाम घोषणा भएको छ । दोस्रो सेमिफाईनल भिडन्तमा भिडेका बालचन्द्र बराल र शोभा कार्की फाईनलका लागि छानिएका हुन् । उनीहरुले सेमिफाईनलमा राजेन्द्र पाठक र मिना नेपालसँग दमदार दोहोरी भिडेका थिए । उनीहरु दर्शक भोट र निर्णायक मतका आधारमा फाईनलमा प्रवेश गरेका हुन् । बालचन्द्र र शोभा फाईनलमा प्रवेश गरेसँगै राजेन्द्र र मिना शोबाट बाहिरिएका छन् ।
दोहोरी च्याम्पियनको फाईनलमा पुगेका दोस्रो जोडी हुन् बालचन्द्र बराल र शोभा कार्की । उनीहरुले सेमिफाईनलमा राजेन्द्र पाठक र मिना नेपालसँग दोहोरी भिडेका थिए । उत्कृष्ट ८ का क्रममा समेत राम्रो मत पाएका बालचन्द्रले उत्कृष्ट १६ मा सबै निर्णायकहरुबाट फो स्टार प्राप्त गरेका थिए भने शोभाले दुई जना निर्णायकबाट फो स्टार र दुई जनाबाट थ्री स्टार प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ६०४ अंक प्राप्त गर्दै ५ अंकको अन्तरमा जित हासिल गरेका थिए । बालचन्द्र र शोभा लाईभ दोहोरीमा चर्चित छन् । उनीहरु परिचित गायक गायिका समेत हुन् । गायिका शोभा कार्कीको माईती म्याग्दीमा पर्छ भने उनको घर गुल्मीमा पर्छ । वि.सं. २०६८ सालदेखि गायन क्षेत्रमा लागेकी उनले एक दशक यो क्षेत्रमा बिताईसकेकी छिन् । शोभाको श्रीमान नेपाल आर्मीमा कार्यरत छन् । उनको बुवा, सानी आमा र दुई भाईहरु पनि छन् ।
गायिका शोभा कार्कीसँगै जोडी बाँधेर दोहोरी भिडिरहेका गायक बालचन्द्र बराल बाग्लुङको तात्कालिन दगातुन डाँडा हाल बडीगाड गाउँपालिकामा जन्मिएका हुन् । उनी एसएलसी सकिएपछि गायन क्षेत्रमा लागेका थिए । सुरुमा ईण्डियन आर्मीमा भर्ती हुन गएतापनि उनलाई सानैदेखि गीतसंगीतमा रुचि थियो । गीतसँगीतकै रुचिले उनलाई ईण्डियन आर्मीले भन्दा पनि गायन क्षेत्रले धेरै तानिरह्यो । धेरै वर्ष रेडियो र टेलिभिजनमा संघर्ष गरेका उनले वि.सं. २०६७ सालदेखि दोहोरी साँझहरुमा काम गर्दै आएका छन् । दोहोरी साँझकै कमाईले उनले बेला–बेलामा गीति एल्बम पनि सार्वजनिक गरेको उनी बताउँछन् । आमाबुवासहित ४ दिदी बहिनी, एक भाई र श्रीमतिका साथमा रहेका बालचन्द्र घरका जेठा छोरा हुन् । उनको एक सानी छोरी पनि छिन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–